Hiampanga anareo... i Môizy itokianareo
Alakamisy 26 marsa 2020 — Herinandro fahefatra amin'ny Karemy — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 5, 31-47 — Ario lavitra anareo ny fahadisoana rehetra nataonareo, hoy ny Tompo, ary manaova fo vaovao sy saina vaovao.
Mitohy ny adihevitra momba an'i Jesoa sy ny niaviany ary ny maha Andriamanitra azy. Andriamanitra Ray, Joany Batista, ny teniny sy ny asany ary ny Soratra Masina dia samy manambara fa i Jesoa no ilay Kristy, Mesia, Mpamonjy andrasana. Rehefa lavina anefa izany fanambarana rehetra izany dia tsy midika inona ho an'izay tsy mino. Diniho isan'andro ny Soratra Masina sy izay ataon'Andriamanitra amintsika dia hihalalina ny finoantsika. Nenjehan'ny Jody izay nino an'i Jesoa sy nanaraka azy. Tsy hoe mandà ny Soratra Masina akory izay manaraka an'i Jesoa sy mino azy fa nahita ny tsara indrindra aza, ary ny Soratra Masina dia i Jesoa no toriny. Ao amin'ny Evanjelin'i Masindahy Joany, izany hoe tsy finoana, izany no fahotana lehibe indrindra ka tsy maintsy ialana. Karemy ny andro, ampirisihana isika handinika bebe kokoa ny Soratra Masina, hanamafy orina kokoa ny finoana.
Tsy midera tena i Jesoa, tsy mila voninahitra amin'ny olombelona satria tsy araka ny fomban'olombelona no hamonjeny fa drafitr'Andriamanitra Ray. Ny atao hoe finoana noho izany dia fisokafana na fanokafana ny fo hidirana sy hitoeran'Andriamanitra, fa tsy ny momba ny tena, izany hoe ny hevitra, ny harena, ny hambom-pon'ny tena no hameno fa aoka ho Andriamanitra. Karemy, fanekena an'Andriamanitra hameno ny fianantsika manontolo, famelana an'Andriamanitra hanjaka.